AKHRISO TAARIIKHDII IYO QISADII CAJIIBKA AHEYD EE THUMAAMA BINU UTHAAL. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
AKHRISO TAARIIKHDII IYO QISADII CAJIIBKA AHEYD EE THUMAAMA BINU UTHAAL.
July 30, 2013 July 29, 2013 1
Goor uu Thumaama ku jiro socdaalkiisa, uuna u dhow yahay magaallada Madiina ayaa waxaa isagoo aan filanaynin ku soo baxay koox ilaalo ah. Ilaaladaas oo ka mid ahaa ilaaladii ciidamada muslimiinta waxay watigaas ku gaaf wareeganayeen degmooyinka ku dhow dhow magaallada Madiina, si ay uga hortagaan haddii uu cadow magaallada soo galo.
Waxay ilaaladii soo kaxeysteen Thumaama Binu Uthaal, weliba iyagoo aan aqoon u lahayn ninka ay soo qafaasheen. Markii ay yimaadeen Madiina, waxay Thumaama ku xireen mid ka mid ah tiirarkii masjidka, dabadeedna waxay la sugeen Rasuulka (scw), bal si uu go’aan uga gaaro arrinkiisa.
Asxaabtii waxay yiraahdeen “maya Rasuulkii Allow”. Wuxuu Rasuulka (scw) ku yiri “waa Thumaama Binu Uthaal ee ahaa reer Banii Xaniifa, ee wanaajiya la dhaqankiisa”. Intaa kadib, wuxuu Rasuulka (scw) u laabtay reerkiisa, isagoo ku yiri “soo aruuriya wixii cunto ah ee aad haysaan, waxaadna u geysaan Thumaama Binu Uthaal”.
Intaa dabadeed, wuxuu Rasuulka (scw) soo aaday xaggii Thumaama, isagoo doonaya inuu si tartiib ahaan uu u soo geliyo diinta islaamka. Wuxuu Rasuulka (scw) ku yiri Thumaama: “maxaad haysaa Thumaamow?”. Thumaama wuxuu yiri “waxaan hayaa kheyr Muxammadow.., haddaad dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddaad gallad sameysid-na waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddiise aad doonaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin’e’’.
Wuu isaga tagay Rasuulka (scw), isagoo Thumaama ku xirnaa tiirkiisa labo maalmood, halkaasna loogu geynayo cuntada iyo cabbitaanka, loogana soo lisayo hashii Rasuulka (scw). Maalintii danbe ayuu Rasuulka (scw) u yimid Thumaama, wuxuuna markale ku yiri “maxaad haysaa Thumaamow?”. Thumaama wuxuu yiri, ma hayo waxaan ka ahayn hadalkii aan horey kuugu iri, haddaad gallad sameysid waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddaad dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddiise aad daanaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin’e..
Thumaama waxaa saameysay dabci wanaaggii iyo naxariistii Rasuulka (scw). Thumaama Binu Uthaal wuxuu ka dhaqaaqay masjidkii Rasuulka (scw), wuu sii socday jeer uu ka gaaray meesha loo yaqaano “Nakhl” una dhow magaallada Madiina, wuxuu yimid meel balli biyood ah, wuxuu ratigiisii ku xirtay toggii biyaha, dabadeedna biyihii ayuu isku daahiriyay, kadibna wuxuu u laabtay masjidkii Rasuulka (scw).
Maba uusan iman goob ay ka buuxaan koox muslimiinta ka mid ah, jeer uu goobtii ka qiray shahaadada, wuxuuna yiri “waxaan qirayaa inuu jiro Allaha xaqa ah, waxan kaloo qirayaa Muxammad inuu yahay addoonkiii iyo adeegihii Alle (sw)”, dabadeedna wuxuu aaday Rasuulka (scw) isagoo ku yiri: “Muxammadow, wallaahi ayaan ku dhaartaye ma jirin qof saaran dunida guudkeeda aan adiga kaa necbaa, hase ahaatee hadda wejigaaga wuxuu noqday wejiyada oo dhan kan aan ugu jeclahay. Wallaahi ayaan ku dhaartaye ma jirin diin aan ka necbaa diintaada, haddase diintaada waxaan ka jeclahay diimaha dhammaantood .
Wallaahi ayaan ku dhaartaye ma jirin magaallo aan ka necbaa magaalladaada, haddase magaalladaada ayaan ka jeclahay magaalooyinka oo idil” Dabadeedna wuxuu intaa Thumaama raaciyay “waxaan asxaabtaada ka galay dhiig oo waxaan asxaabtaada ka laayay rag badan, ee maxaa igu waajibaya inaan sameeyo?”. Wuxuu yiri Rasuulka (scw) isagoo tilmaamaya samaaxada diintaan ay leedahay “korkaaga cannaan ma ahaanin Thumaamow, Islaamku wuxuu jaraa oo tirtiraa wixii denbi ee hore”, wuxuuna ugu bishaareeyay kheyrka iyo wanaagga uu Eebbe (sw) u qoray islaamnimadiisa awgeed.
Thumaama Binu Uthaal Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu ahaa muslimkii ugu horeeyay ee gala magaallada Makka, isagoo talbiyeysanaya. Markii ay qureysh maqleen dhawaaqii Thumaama ayaa waxay hal mar ku soo qamaameen xaggiisa, iyagoo aad uga careysan falka Thumaama. Waxay la soo baxeen seefahooda, iyagoo soo aadayna dhinacii ka soo yeerayay dhawaaqii Thumaama, si ay u qabtaan ninkan ugu soo galay buulkoodii ama goobtii ay degganaayeen.
Codkii Thumaama wuxuu cirka isku sii shareeray markii ay u soo dhowaadeen oo ay u yimaadeen qureysh, weliba isagoo si geesnimo ku jirto u eegayo xaggooda. Mid ka mid ah dhalinyaradii qureysh ayaa damcay inuu ku dilo Thumaama seeftiisa, hase ahaatee tolkiisa ayaa qabtay, iyagoo ku yiri “war miyaadan aqoonin ninka aad u fa-fakanaysid, waa Thumaama Binu Uthaal ee ahaa boqorkii Yamaama, wallaahi haddaad u geysatid dhibaato waxaa hubaal ah inuu naga jarayo sahaydii aynu heli jirnay, dabadeedna gaajo ayeeynu u dhimanaynaa”. Intaa kadib, qureysh waxay aadeen xaggii Thumaama kadib markay seefahoodii ku cesheen galalkii ay ku jireen, waxayna ku yiraahdeen “ma waxaad ka baxday diintaadii iyo diintii ay haysteen aabayaashaadii hore”.
Qiso Cajiib Ah Cibro Qaadashana Mudan ‘Waxaan ka Xishooday Allaah Kheerkiisa inaan Baryo’..
KaLaFoGe March 23, 2014
DAAWO VIDEO ARGAGAX LEH: Marwo U Dhalatay Turkey Oo Qoorta Ka Jartay Nin Kufsaday.
KaLaFoGe April 18, 2013
Barnaamijkii Qomooyinka JaCeylka:: Markuu Qalay Jirkeygii !! Miyuu Qaaradaba Ka Haajirey !! ? Qiso Xanun Badan !!
KaLaFoGe September 26, 2015 September 25, 2015